China resin ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Rada
Ihe nkiri PLA
Wepu ihe njikọ PLA
Ihe eji eji ụlọ eme ihe
Kechie Iji Jiri Ihe Mmegide
PLA Nnukwu Ihe Nkiri Nkiri
Atọ ihe nkiri
Akpa ịzụ ahịa
Iko PLA Cup
Akwụkwọ Mpempe akwụkwọ
Ihe na-emebi emebi PLA Cling Wrap
100% Biodegradable & Compostable, ezigbo obibi-enyi na enyi, enweghị mmerụ ahụ na gburugburu ebe obibi, nwere ike bụrụ nke zuru oke na H2O na CO2 na ụlọ ọrụ na-emepụta compost na-arụ n'ime ụbọchị 180.
Agba dị iche iche
Nnukwu Ihe Nkiri Nkịtị
Maka ihe nkiri PLA
PLA ịkpụcha osisi Resin
Maka ogwu ogbugba
PLA ahịhịa Resin
PLA na-afụ ihe nkiri Resin
A: 100% Biodegradable & Compostable, ezigbo obibi-enyi na enyi, enweghị mmerụ na gburugburu ebe obibi, nwere ike bụrụ nke zuru oke na H2O na CO2 na ụlọ ọrụ na-emepụta fatịlaịza n’ime ụbọchị 180.
B: Ojiji: Kitchen Jiri. Microwave kpo oku, friji nri ichebe, ọhụrụ ma esie ya nri nkwakọ na n'oge ndị ọzọ na-ọtụtụ-eji ezinụlọ, ụlọ ahịa, nkwari akụ na ulo oru nri nkwakọ ubi.
C: Ọrụ: Maka ngwaahịa ndị gwụchara, anyị na-enye atụmatụ ogologo oge iji meghachi omume na nzaghachi ndị ahịa ọ bụla nwere; maka ihe ndị gbanwere agbanwe, anyị na-enye ọrụ teknụzụ mgbe ire ere iji hụ na ịmepụtara nke ọma.
A, Ogo mmesi obi ike：
Anyị nwere ọkachamara QA usoro iji hụ na àgwà nke anyị uka ibu, si akụrụngwa na okokụre ngwaahịa.
B, Teknụzụ dị elu:
Nọgide na-emeziwanye nkà na ụzụ n'oge nrụpụta, anyị nwere ike ịmepụta ihe nkiri PLA dị elu;
C, Otu ndị ọkachamara:
Anyị pụrụ iche na PLA metụtara ngwaahịa n'ihi na ihe karịrị afọ 10, maka modifying akụrụngwa, n'ichepụta okokụre PLA ngwaahịa, na-anyị na ngwaahịa a elu-larịị àgwà na function.From technicians otu ka ahịa otu, anyị raara nye ndị kasị mma-ahaziri biodegradable azịza nye ndị ahịa niile na ụlọ ọrụ dị iche iche.
Anyị nwere asambodo metụtara ngwaahịa anyị, iji gosi nchekwa nke ngwaahịa anyị yana igosipụta ezi obi anyị, dịka FDA, EN13432, ASTM D6400, BPI, wdg.
Kedu ihe ọ pụtara site na 100% Compostable?
100% compostable pụtara na ngwaahịa PLA na-agbanwe agbanwe kpamkpam. Enwere ike ịtụgharị ya na monomer na polymer, ma ọ bụ, enwere ike ịgbanwere ya na mmiri, carbon dioxide na ihe ndị sitere n'okike. PLA na-adigide nke ọma karịa mmanụ a na-eji plastik eme.
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji mejupụta ngwaahịa PLA kpamkpam?
Dịka, PLA ga-etinye compost kpamkpam na compost azụmahịa na ụbọchị 30-45. N’ebe a na-etinye composting bins, ha nwere ike iwe ogologo oge.
A ga-etinye PLA na compost na ahịhịa m?
Ngwaahịa PLA chọrọ ụfọdụ ọkụ, mmiri na ikuku na compost. Ihe mkpofu ahịhịa na-adịghị mma anaghị enwe ọnọdụ ndị a dị mkpa yana ihe ndị a kpofuru ekpofu na-ejedebe na ebe mkpofu ndị a. Ọzọkwa, a na-emechi ebe a na-ekpofu ahịhịa nke pụtara na ire ere na-eme n'okpuru ala ma ihe a tụbara na ahịhịa nwere ike ịchekwa ọtụtụ iri afọ.
Gịnị bụ nchekwa chọrọ maka PLA?
A ghaghị idebe PLA site na ìhè anyanwụ na ebe dị jụụ, nkụ. Debe ngwaahịa PLA n'okpuru okpomọkụ nke 110 degrees (F) na n'okpuru 90% iru mmiri n'oge niile.
Kedu ka m ga - esi jigide ngwaahịa PLA n'oge njem?
Debe ngwaahịa PLA na ebe dị jụụ, nke akọrọ na ọnọdụ okpomọkụ anaghị adịkarị 110 degrees (F). Agbanyeghị na achọrọghị, a na-atụ aro ụgbọala gwongworo na ibufe ngwaahịa PLA.
Enwere m ike iji ngwaahịa PLA maka ihe ọ hotụ hotụ na-ekpo ọkụ?
Ee, ọ bụrụ n ’ọnụọgụ ihe ọverageụverageụ agafeghị ogo 110 (F). Ngwaahịa PLA na-arụ ọrụ nke ọma mgbe ejiri mmanya na-egbu oyi ọ bụ ezie na ụdị okpomọkụ dị iche iche nke ngwaahịa PLA bụ 110 degrees (F). Anyị nwere mkpuchi CPLA kọfị na-eguzogide okpomọkụ iji kpoo iko akwụkwọ nke enwere ike iji ya na mmanya ọkụ.
Kedu ụgwọ ọnụahịa nke PLA iji tụnyere ngwaahịa plastik mgbe niile?
Ọnụ ego na-adabere na akara, ụdị, na nha nke usoro ahụ. Ma ọnụ ahịa e jiri ya tụnyere ngwaahịa plastik na-aghọwanye asọmpi ka mmasị na ngwaahịa na-emebi emebi. Ihe dị iche na ọnụahịa bụ ihe dịka 15 +%.
Ihe PLA dị mma oriri?
Ngwaahịa PLA anaghị eri nri ma ọ bụkarịrị anaghị egbu egbu. Obere akụkụ nke PLA ga-yikarịrị ka ọ ga-agafe na-adịghị emerụ ahụ site na eriri afọ. Ozugbo a gafere eriri afọ eriri afọ a ga-ewepụ ya na stool. Biko gakwuru dọkịta ma ọ bụrụ na mgbu ma ọ bụ ahụ erughị ala bilitere.
Ọka na-eme m ihe nfụkasị ahụ; m ka nwere ike iji ngwaahịa PLA?
Ee, okpomọkụ a na-eji na-eme ka starch sitere na ọka na-ebibi profiilin immunologically reactive. Profilin bụ kemịkalụ nke na - ebutekarị ihe nfụkasị ahụ na ahụghị na ngwaahịa PLA.
Nke gara aga: Ihe nkiri
Osote: PLA ahịhịa
Adreesị:Owuwu 4, Santang Industrial Park, Nke 338, Jiuhua North Road, Wuhu, Anhui,
Akpa mkpofu ahịhịa na-ere ere, Akpa mkpofu Compostable, Eco Cling Kechie Sugar Kechie, Kechie Biodgradable Cling Kechie, Akpa Compostable, Ihe nkiri a na-ere ere na-ere ere,